Global Voices teny Malagasy » Nakarin’ny fitondrana ao Angola fitsarana indray ilay mpanao gazety, Rafael Marques, nanao fanadihadiana momba ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2018 5:11 GMT 1	 · Mpanoratra Dércio Tsandzana Nandika (en) i Liam Anderson, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Angola, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Tamin'ity indray mitoraka ity, miatrika fiampangana  noho ny “fanevatevana manampahefam-panjakana” i Marques rehefa avy namoaka lahatsoratra  tamin'ny volana Oktobra 2016 tao amin'ny tranonkalam-baovao tsy miankina Maka Angola (izay izy no mpanorina sady tonian-dahatsoratra) ary niresaka momba ny mety nisian'ny kolikoly nataon'ilay mpampanoa lalàna teo aloha João Maria de Souza.
Hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena tamin'ny Portugal tamin'ny taona 1975, teo ambany fitarihan'ny Movimento Popular de Libertação de Angola  (MPLA), antokon'ny filoha ankehitriny João Lourenço, izay voafidy tamin'ny volana Aogositra 2017 i Angola. Lourenço no nanolo an'i José Eduardo dos Santos,  izay teo amin'ny fahefana nandritra ny 35 taona mahery ary nitarika governemanta voampanga tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona  sy ny famerana ny fahalalaham-pitenenana, ahitana ireo mpanao gazety sy mpitsikera matetika iharan'ny herisetra.
Horácio Junjuvili, mpisolovavany, niresaka  tamin'ny Deutsche Welle tamin'ny volana Martsa:
Navoaka voalohany ho an'i Marques ny fiampangana tamin'ny desambra 2017. Nanomboka tamin'ny 19 martsa ihany ny fitsarana. Nofoanana  ny fotoam-pitsarana farany, tokony natao tamin'ny 16 aprily noho ny tsy fahatongavan'i João Maria de Souza, izay nilaza fa, amin'ny maha-mpitsara misotro ronono azy, dia azony atao ny mitaky ny tsy fampiharana lalàna aminy amin'ny fandehan-draharaha izy ka tsy nanaiky ho entina eo anatrehan'ny fitsaram-paritany ao Angola.
Tamin'ny May 2016, taorian'ny fanerena nataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny fiarahamonina sivily, nesorin'ny  manampahefana ao Angola ny fiampangàna rehetra nanenjehana an'i Marques izay mifandraika amin'ilay boky.
Araka ny voalazan'i David Mendes, mpisolovavan'i Marques tamin'izany, nahitana tsy fanarahan-dalàna maromaro ity fitsarana ity, anisan'izany ny fandavan'ny fitsarana hihaino fijoroana vavolombelona avy amin'ireo manam-pahaizana sy ny vavolombelona, ​​ankoatra an'i Marques tenany ihany. Hoy izy  tamin'ny DW tamin'io fotoana io:
Tamin'ny raharaha iray, fantatra amin'ny hoe 15+2 , nosamborina tamin'ny volana Jona 2015 ny vondrona mpikatroka nandritra ny fotoam-pianarana momba ny politika Angoley nokarakarain'ny vondrona, izay nifantoka tamin'ny boky From Dictatorship to Democracy (Miala amin'ny Didy jadona mankany amin'ny demokrasia) nosoratan'ilay mpanoratra amerikana Gene Sharp, izay manolo-kevitra endrika milamina amin'ny fihetsiketsehana.
Mpikatroka iray hafa lasibatry ny manampahefana ihany koa i José Marcos Mavungo, mpanorina ny fikambanana mpiaro zon'olombelona, ​​ny Fikambanana Sivika Mpalabanda ao Cabinda (Mpalabanda Associação Civica de Cabinda). Nogadraina  tamin'ny volana Martsa 2015 i Mavungo, voampanga ho nikomy, ary avy eo voaheloka higadra enin-taona an-tranomaizina. Navotsotra izy tamin'ny volana Mey 2016 noho ny “tsy fisian'ny porofo”.
Protektorà (Zanatany) Portiogey nanomboka ny taona 1885 hatramin'ny 1956 i Cabinda, tsofo-tany (enclave) any Angola any avaratry ny reniranon'i Congo, raha nanapa-kevitra hifehy ny faritra avy any Angola ny fitondrana kôlônialy, saingy tsy nahazo ny fankatoavan'ny mpitarika eo an-toerana. Hatramin'ny taona 1960, niatrika ny fikomian'ny  mpisintaka mitam-piadiana izay nitombo hatrany taorian'ny fahaleovantenan'i Angola ny faritra, izay nandova ny fiandrianana tao amin'ny faritra avy amin'ny Portiogey.
Tamin'ny volana desambra 2017, nogadraina  ireo mpikatroka 28 avy ao amin'ny fikambanana ho an'ny Fampandrosoana ny kolontsaina momba ny zon'olombelona (ADCDH) ao Cabinda raha niomana handray anjara tamin'ny hetsika milamina. Navotsotra tamin'io andro io ihany izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/27/118360/
 miatrika fiampangana: http://www.dw.com/pt-002/rafael-marques-volta-ao-tribunal-de-luanda-para-julgamento/a-43033926
 fahaleovantena : https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%AAncia_de_Angola
 fanitsakitsahana ny zon'olombelona: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/angola
 Hoy izy: http://www.dw.com/pt-002/jornalista-rafael-marques-condenado-a-seis-meses-de-pris%C3%A3o-com-pena-suspensa/a-18480832
 Namoaka : http://www.tintadachina.pt/pdfs/626c1154352f7b4f96324bf928831b86-inside.pdf
 fikambanana iraisam-pirenena samihafa : https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/angola